မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: လူ မိုက် သား မို့ရမ်း ကာ နေ တဲ့ ၊ လမ်း မ တော် စည် ပင် ။ “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
လူ မိုက် သား မို့ရမ်း ကာ နေ တဲ့ ၊ လမ်း မ တော် စည် ပင် ။
မ နေ့က (၁-၉ ၂၀၀၈ ) နေ့က လမ်း ဘေး မှ ခေါင်း ရွက် ဗျက် ထိုး ဈေး သည် တွေ ကို ၊ ဈေး ကောက် ငါး ဆ တိုး ကောက် နေ တာ လမ်း မ တော် မြို့နယ် မှာ လို့စိတ် ချ ရ တဲ့ သ တင်း ထပ် ပြီး ရောက် လာ ပါ တယ် ။ လမ်း ဘေး က ဘု ရား ပန်း ရောင်း တဲ့ ဈေး သည် တွေ ဆို ရင် မ နက် ပိုင်း ဈေး ချိန် က လေး ပဲ ရောင်း တာ ဖြစ် ပြီး ၊ နေ့စဉ် ဈေး ကောက် ( ၅၀ ) ကျပ် ပဲ ပေး နေ ရ ခဲ့ ရာ မှ (၁-၉-၂၀၀၈) နေ့မှာ ( ၂၀၀ ) ကျပ် ကောက် ခံ တယ် လို့သိ ရ ပါ တယ် ။ ကန် ထ ရိုက် ပေး လိုက် တယ် ဆို တာ က လည်း အ မှန် ပါ ပဲ ။ ကောက် ခံ တဲ့ စည် ပင် ၀တ် စုံ နဲ့အ မျိုး သ မီး တွေ ကိုယ် တိုင် ပြော သွား တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဈေး ကောက် ကို ကံ ထ ရိုက် က ၄ဆ ၅ဆ တိုး ကောက် ပြီး ၊ ဘာ တာ ၀န် ယူ မှု မှ မ ရှိ ပါ ။
ကောက် ခံ သော ငွေ ပ မာ ဏ အ တွက် ၊ ငွေ လက် ခံ ဖြတ် ပိုင်း လည်း မ ပေး ပါ ။ စာ ရင်း မ ရှိ အင်း မရှိ ကောက် ယူ နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ သည် ။ သူ တို့က ဈေး ကောက် ကောက် ပြီး ၊ စည် ပင် ရဲ ၊ က တော့ ဈေး သည် တွေ ဆီ က ပ စ္စည်း တွေ ယူ ပါ တယ် ။ မ ပေး ရင် ဈေး ဘမ်း ကို ပါ သိမ်း တယ် လို့သိ နေ ရ ပါ တယ် ။ ဒါ တွေ ကို မြို့တော် ခန်း မ က မြို့တော် ၀န် ဆို သူ သိ ပါ သ လား ။ နေ ပြည် တော် က ဗိုလ် သန်း ရွှေ ကော သိ ပါ သ လား ။
ဒီ သ တင်း နဲ့အ တူ လမ်း မ တော် စည် ပင် အ မှိုက် သိမ်း ဋ္ဌာ န က ကိုယ် ထိ လက် ရောက် ကျူး လွန် မှု တစ် ခု ပါ ကြား သိ ရ ပါ တယ် ။ ၀န် ထမ်း အ မျိုး သ မီး တစ် ဦး ၊ အ လုပ် ( ၂ ) ရက် ပျက် လို့ဆို ပြီး ၊ အ လုပ် ပြန် တက် တဲ့ နေ့မှာ ၊ ( လမ်း ကြောင်း မှူး ) ဆို သူ က ၊ ပါး နား ရိုက် ပြီး ခြေ နှင့် ကန် ကြောက် သဖြင့် ၊ ထိုင် လျက် လဲ ကျ သွား သော ၊ ကိုယ် ၀န် ( ၃ ) လ ရှိ နေ သည့် ၊ ၀န် ထမ်း အ မျိုး သ မီး တစ် ဦး ဆေး ရုံ တင် ထား ရ တယ် လို့သ တင်း ရ ရှိ ပါ တယ် ။ လူ မိုက် သား တွေ မို့၊ ဖ အေ တူ လို့ရမ်း ကား နေ တာ ၊
မြန် မာ ပြည် မှာ ဘာ ဥ ပ ဒေ မှ မ ရှိ ဘူး ဆို တာ ပြ နေ တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တော့ တယ် ။
( အ . ဘ . ယ )
Undercover in Burma: investigating the Saffron Rev...
ဂုဏ်ယူပါသည် ရခိုင် အာဇာနည်အများ။
သတိထားပါ သူခိုး site များ
( အ ကု သိုလ် သ စ္စာ ) ဆိုသည်မှာ
20th Anniversary of NLD ( ဖို့ ဝိန်း)
All Dhamma friends You, Your family and frien...
First Anniversary of Burma's saffron revolution- N...
Burma Dissidents Mark one Year Anniversary (၂၇။၉။၂...
NLD အဖွဲ့ ချုပ် အနှစ် ၂၀ ပြည့် ကြေညာစာတမ်း
စိတ်တော့ ပျက်ပါနဲ့ဗျာ..UN လည်း လိပ်လိုတော့ လှုပ်စ...
အခုထိ ဖမ်းဆဲ..ဖမ်းမြဲ ဖမ်းလတ္တံ ပါဘဲ..
Felicitation letter to 20th Anniversary of NLD by ...
အမေ ဘာများဖြစ်ပါလိမ့် 
မှန်တာပြော..မှန်တာတောင်းဆိုလို့ကတော့ နအဖ က ဟင့်အင်...
ဗုဒ္ဓသားတော်ဆိုတာ..ဘယ်ခါ ဒူးမထောက်၊ ရှန်းရှန်းတောက်...
ကနေဒါ ဗမာများရဲံအလှူ..သာဓု ခေါ်ကြပါခင်ဗျာ..
တားမြစ်ပိတ်ပင်နေသော နိုင်ငံများကို UN ၌ ဘုရ်ှက ပြစ...
U.S. Senate professional staff met with MRC re...
ABFSU-FAC statement for NLD (20) years Anniversary...
Saffron Revolution ဆိုတာ ဘာလည်း..???
ဆူးလေရဲ့ မနေ့ ညရှူခင်း..
ဟန်ဆောင် ပန်ဆောင်..ထောင်ခါပြနေတဲ့နအဖ..နိုင်ငံရေး အ...
လူယုတ်မာ တို့ သွားရာလမ်း
ကြည့်လုပ်ဥိးလေဗျာ အရပ်ကတို့ ..လူကောင်းတွေ မျိုးပြူ...
တကတည်း အကျိုးနည်းတော်..ကျုပ်အသံဘဲ လူကြားတယ်..ရှက်က...
ဗျို့ဦးဝင်းထိန်...ဘယ်မလဲ..နတ်ဖွက်တာ မဟုတ်ပါဘူးထ...
စု- လွှတ်- တွေ့ ဆုံ
လှပသော ကရင်မြေ..ယမ်းနံ့ ဖုံးလွှမ်းရာ ဌာနေ။
မိစ္ဆာကောင်တွေ မျိုးဖြုတ်ကြစို့ 
Burma Launches Angry 'Cyber-War'
နောက်တခါ လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဘဲ
NLD ၏ ကျေညာချက် ၉။၂၂။၂၀၀၈
သံဃာ့ အခွင့်အရေး တွေဆုံးရှုံးနေ
ဆင်ဗုံးတွေ နဲ့ ခြောက်လှန့် နေပါတယ် ဗျို့ 
လူတိုင်းသိစေမဲ့ ငွေစက္ကူ campaign.
တိုးတက် တောင့်တင်း လာသော ၂၁ ရာစုက..နာဇီ ဗမာပြည်.
အမှတ်တရ..မေ့ မရတဲ့ သွေးစွန်းပေနေ့ များ (သံဃာ ၏ ဂုဏ...
one year anniversary of the Saffron Revolution
Security tightened in Mon State
နို့ မှုန့် အဆိပ်သင့်မှု
ခလေး အမေ ကိုဖမ်းရသလား..
Generation wave မှ အာဇာနည်များ..
ရည်းစားစာတွေ ခိုးဖတ်ချင် လို့ တဲ့ ဗျို့ 
အိမ်သာထဲမှ.ရေနဲ့ .စက္ကူမရှိရင်..ကျွန်တော် သန့် စင်ေ...
မန် နေ ဂျာ နဲ့သူ တောင်း စား ။
မျက်မြင်သက်သေများ ပြောပြတဲ့ ခရေစေ့ တွင်းကျ မြန်မာ
အမျိုးသားရေးဦးဝင်းနိူင် ၏ အင်တာဗျူး..
မစုစုနွေး မိသားစုနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရန် ထောင်တွင်း...
ရောင်းယင်းတို့ ရေ..ဘုန်းကြီးတောင်..ရေ မပေးရင်...ဆိ...
တကာတော် တွေတော့ လာနေပြီဗျို့ 
မျိုးပြုန်း တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ ကရင်သွေးချင်းများ။ ...